रेशमलाल चौधरी अनसनमा
काठमाडौं । टीकापुरको नरसंहार काण्डमा डामिएका र पुर्पुक्षका लागि जेल हालिएका रेशमलाल चौधरीले ३ बुँदे माँग राखेर जेलमै अनसन सुरु गरेका छन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीकी नेतृ मीना चौधरीले त कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई विजय भएको प्रमाणपत्र दिइएन, शपथग्रहण गराइएन, टीकापुर घटनामा आरोपित २६ जनालाई क्षतिपूर्ति सहित रिहाई गरिएन भने सडकमा थरुहटले कडा भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने र पार्टीले धर्ना दिएर भए पनि संसद चल्नै नदिने दावी गरेकी छिन् ।
कैलाली घटनामा एक नावालक सहित ८ प्रहरी मारिएका थिए । यही घटनामा रेशम लाल चौधरी आरोपित भएका हुन् र उनलाई साथ दिएको भनेर २६ जनालाई कैलाली जेलमा राखिएको छ । रेशम लाल चौधरीले कसरी चुनावमा खडा हुनपुगे, किन कसैले दावी उजुरी दिएनन् र सबैभन्दा बढी भोट उनैलाई जनताले किन दिए ? अनेक प्रश्नहरु छन् । तर प्रहरी अनुसन्धानले रेशम चौधरीलाई कैलाली नरसंहारको दोषी मानिरहेको छ र मुद्दा मा अदालतले फैसला गरिसकेको छैन ।
आश्चय त के पनि छ भने पक्राउ आदेश जारी भएका यी रेशम लाल चौधरीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिल्ली भ्रमणका बेलामा दिल्लीमै भेटेका तस्वीरहरु सार्वजनिक भएका थिए भने त्यसपछि देउवा प्रधानमन्त्री बने र उनलेसमेत यिनलाई ६० लाख क्षतिपूर्ति दिएका थिए । सरकार पक्राउ आदेश जारी गर्ने र सरकार प्रमुख नै यिनलाई भेट्ने, कारण के हो ? रहस्यमय रहेको छ ।
जनताले चुनाव जिताइसकेका रेशम चौधरीलाई अदालतले कस्तो फैसला गर्ला, उनले सांसदको मान्यता पाउलान् कि ज्यानमारामा पर्लान्, यी यस्ता प्रश्नहरु हुन् जसले थारु समुदायलाई समेत प्रभावित पार्नेछ ।